Imigomo nemibandela | Izinkampani Zomthetho eDubai
Vikela Isicelo Sokwengezwa
6 Izaziso Ezijwayelekile Ezibomvu Zikhishiwe
Imibono eyiphutha ye-Interpol
Sicela ufunde okulandelayo ngokucophelela, njengoba kuyinkontileka ebophayo phakathi kwakho ne-Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants noma Abameli be-UAE. Uma uneminyaka engaphansi kweshumi nesishiyagalombili (18), akumele usebenzise i-Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants noma Abameli be-UAE. Ngokusebenzisa Abameli be-UAE uyavuma ukuboshwa yile Migomo Yokusebenzisa. Uma ungayamukeli le migomo nemibandela, akumele usebenzise i-Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants noma Abameli be-UAE.
Iyini i-Lawyers UAE? Abameli i-UAE iyinkundla yobuchwepheshe (ingosi yewebhusayithi) yokuxhumana phakathi kwabameli namalungu amadala omphakathi. Abameli i-UAE ayinikezi iseluleko sezomthetho. Abameli abafinyelela Abameli be-UAE ababona Abameli ozakwethu be-UAE, abasebenzi noma ama-ejenti; bangamaqembu esithathu. Abameli i-UAE ayincomi noma iphakamise noma yimuphi ummeli kule webhusayithi, futhi ayikwazi ukunikeza imvume noma isiqinisekiso semininingwane yabo noma iziqu. Unesibopho sokwenza owakho ukukhuthala mayelana nanoma yimuphi ummeli. Abukho ubudlelwano bommeli neklayenti obuhloselwe noma obakhiwe phakathi kwakho ne-Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants noma Abameli be-UAE ngokusebenzisa kwakho Abameli be-UAE. Nakuba i-Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants noma Lawyers UAE ingase isize ukubonisana kwezomthetho okuku-inthanethi phakathi kwakho nommeli, Abameli be-UAE abahlanganyeli kunoma yisiphi isivumelwano sokumeleleka ongasifaka nanoma yimuphi ummeli. Ngokufanelekile, uyavuma ukuthi Abameli be-UAE abanasibopho sanoma yiziphi izenzo noma ukweqiwa kwabameli. Abameli i-UAE ayincomi noma incoma abameli abathile. Ngaphambi kokugcina noma yimuphi ummeli noma ucele ukubonisana nommeli KwaLawyers UAE, kufanele ucabangele ngokucophelela ulwazi nolwazi lommeli. Uma ugcina izinsiza zommeli ngaphezu kokubonisana nabameli be-UAE, kufanele ucele isivumelwano sesevisi yezomthetho esibhaliwe esichaza imigomo nemibandela yokumelwa, okuhlanganisa zonke izinkokhelo, izindleko, nezinye izibopho. Abameli i-UAE ayinaso isibopho sokuqinisekisa ubunikazi, izicucu noma iziqu zabameli abafinyelela Abameli be-UAE okuhlanganisa, kodwa kungagcini nje, ulwazi oluqukethwe kumaphrofayela abameli, njengegama labameli, inkampani yomthetho, isihloko, imininingwane yokuxhumana, isizinda semfundo, izindawo zokungcebeleka, izindawo zokuzijwayeza nanoma yiluphi olunye ulwazi. Abameli i-UAE ayinasibopho sokubuyekeza, ukuhlela, ukuguqula noma ukuqinisekisa imininingwane yephrofayela. Abameli i-UAE ayinaso isibopho sokubuza noma ukuqinisekisa ukuthi abameli bafakwe umshwalense ngokumelene nobudedengu bomsebenzi noma ukungenzi kahle. Unesibopho sokuqhuba eyakho inkuthalo mayelana nokuthi ungubani noma iziqu zanoma yimuphi ummeli. Ngaphandle kwalapho kucaciswe ngenye indlela lapha, “Abameli be-UAE” basho Abameli be-UAE kanye newebhusayithi ye-lawysuae.com.
Ukuxhumana Komsebenzisi. Abameli i-UAE iyindawo yabangebona abameli nabameli (bebonke “Abasebenzisi”) ukuthi baxhumane. Abasebenzisi bewebhusayithi, hhayi Abameli be-UAE, bahlinzeka ngokuqukethwe kwezokuxhumana. Abameli i-UAE abayona ingxenye yezokuxhumana phakathi kwabasebenzisi. Abameli i-UAE ayinaso isibopho sokuhlela, ukulungisa, ukuhlunga, ukusikrini, ukuqapha, ukuvumela noma ukuqinisekisa ukuxhumana kule webhusayithi. Abameli i-UAE iyasichitha sonke isibopho sokuqukethwe kwanoma yikuphi ukuxhumana phakathi kwabasebenzisi abakuwebhusayithi nanoma yiziphi izinyathelo ongazithatha noma wenqabe ukuzithatha ngenxa yanoma yikuphi ukuxhumana okunjalo. Unesibopho sakho kuphela sokuhlola nokuqinisekisa ubunikazi nokwethembeka komthombo nokuqukethwe kwanoma yikuphi ukuxhumana.
Abameli i-UAE ayinasibopho sokuqinisekisa, futhi ayenzi izethulo noma iziqinisekiso mayelana, ubunikazi noma ukwethembeka kwanoma yimuphi ummeli noma ongeyena ummeli noma okuqukethwe kwanoma yikuphi ukuxhumana kule webhusayithi. Njengoba kusetshenziswe lapha, ukuxhumana kufaka phakathi, kodwa akugcini nje, noma yikuphi ukuxhumana okuqondiswe kuwe okuvela kunoma yimuphi Umsebenzisi ngokuqondile noma ngokungaqondile ngokuphathelene nale webhusayithi. Ukuxhumana kufaka phakathi, kodwa akugcini nje, ukuxhumana kwabameli babameli be-UAE, okuhlanganisa ulwazi lwephrofayela. Ukuxhumana kule webhusayithi kukhawulelwe, akubandakanyi ukuhlolwa komuntu mathupha noma ukuvakasha, futhi akufaki izivikelo nezinqubo ezivamile zokuhlola nokuvakasha komuntu mathupha. Naphezu kwalokhu okungenhla, Abameli be-UAE bayaligodla ilungelo, kodwa ababophekile, ukuvimbela noma ukususa noma yikuphi ukuxhumana Kwabameli be-UAE. Uma udaba lwakho lwezomthetho lubandakanya icala elingase libe khona, kubalulekile ukuthi uqaphele ukuthi icala kumele lifakwe, noma liphendulwe, phakathi nesikhathi esithile noma amalungelo akho angase athinteke kabi. Ngakho-ke, uma ummeli enqaba ukukumela, uyakhuthazwa ukuba uxhumane ngokushesha nomunye ummeli ukuze uvikele amalungelo akho. Isinqumo sommeli sokungakumeli akumele usithathe njengesisho mayelana nokufaneleka kwecala lakho. Abameli be-UAE bahlanganisa izinkundla lapho Abasebenzisi bangabamba iqhaza engxoxweni evamile yomthetho, baxoxe ngeziqu zabameli noma ezinye izihloko ezingezona imfihlo. Ukuxhumana kungase kungavikelwe ekudalulweni yilungelo lommeli-iklayenti noma ezinye izimfundiso zelungelo.
Ukugcina kuyimfihlo; Amalungelo. Abameli be-UAE bangabandakanya izinkundla zokuxhumana nezici ezingafanelekile ukuxoxa ngolwazi oluyimfihlo noma iseluleko sezomthetho. Ulwazi oluyimfihlo lungase luhlanganise kodwa alukhawulelwe kugama lakho, imininingwane yokuxhumana, ukuhlonza ulwazi olumayelana nabanye abantu noma izinhlangano, ubufakazi noma ukuvunyelwa kwecala lomphakathi noma lobugebengu, noma olunye ulwazi mayelana nezindaba zakho zezomthetho. Izinjongo zezinkundla nezici ku-Lawyers UAE ingxoxo evamile yomthetho kanye neziqu zabameli. Abameli be-UAE abanasibopho sokudalulwa kwamabomu noma okungahlosiwe kolwazi oluyimfihlo. Kungenzeka ukuthi noma yikuphi ukuxhumana kule webhusayithi kungase kwamukelwe noma kubanjwe abantu besithathu, kuhlanganise nabangebona abameli, ngenxa yokwephulwa kwezokuphepha, ukungasebenzi kahle kwesistimu, ukunakekelwa kwesayithi, noma ngezinye izizathu. Abasebenzisi bale webhusayithi bathatha ubungozi bokuthi ukuxhumana kwabo kungase kutholwe abantu besithathu futhi bangase bangavikelwa ekudaluleni ilungelo lommeli-iklayenti noma ezinye izimfundiso zelungelo, futhi bavume ukungathwesi Abameli i-UAE benesibopho ezimeni ezinjalo. Ulwazi namasevisi ahlinzekwa Abameli be-UAE aphathelene ngokwemvelo futhi Umsebenzisi uyavuma ukuthi akayena umuntu oqhudelana naye Wabameli be-UAE futhi uyavuma ukungabelani ngolwazi olunjalo nanoma iziphi izimbangi Zabameli be-UAE. Uyavuma futhi ukuthi umonakalo wemali wokwephulwa kwalesi sigaba ungase unganele nokuthi Abameli be-UAE bazoba nelungelo lokuthola usizo oluphuthumayo, ngaphandle kwemfuneko yokuthumela ibhondi. Lesi sigaba sizoqhubeka nokuba khona noma yikuphi ukupheliswa kwalesi sivumelwano isikhathi esiyiminyaka emibili (2), noma inqobo nje uma ulwazi okukhulunywa ngalo luhlala luyimfihlo yokuhweba ngaphansi kwemithetho neziqondiso ezisebenzayo, kungakhathaliseki ukuthi yisiphi isikhathi eside.
Imibuzo Yomthetho. Imibuzo esemthethweni Ngabasebenzisi (“Amacala”) Kubameli be-UAE ingase ifinyelelwe abantu bangaphandle kanye/noma i-imeyili kubameli bezinkampani zangaphandle nabangebona abameli. Abasebenzisi akufanele balethe noma bathumele imininingwane abangafuni ukuyidalula emphakathini. Abameli abangakumeli, abangebona abameli, namalungu omphakathi bangabuka Amacala. Amacala angase angavikelwe ekuvezweni yilungelo lommeli-iklayenti noma imfundiso yomkhiqizo womsebenzi. Ukuhambisa ulwazi oluyimfihlo noma olufaka icala olungasetshenziswa ngokumelene nawe njengobufakazi noma ukuvuma icala lomphakathi noma lobugebengu akuvunyelwe. Abasebenzisi abahambisa Amacala bayavuma ukuthintwa abameli kanye nezinkampani zangaphandle, okuhlanganisa Abameli be-UAE. Izimpendulo zabameli zingatholwa abantu besithathu kanye/noma i-imeyili kubantu besithathu okuhlanganisa abameli nabangebona abameli. Nokho, Abameli be-UAE bayaligodla ilungelo lokungashicileli, ukungathumeli i-imeyili, noma ukuhlela noma ukususa noma yiliphi Icala, futhi sinelungelo lokungashicileli, ukungathumeli i-imeyili, noma ukuhlela noma ukususa noma iyiphi impendulo kunoma iliphi Icala. Kubameli be-UAE, Abasebenzisi ababuza imibuzo ngezinye izikhathi bangase babizwe ngokuthi “Abathengi” futhi Abasebenzisi-abammeli ngezinye izikhathi bangabizwa ngokuthi “Ummeli,” “Ummeli” noma “Ummeli wakho” noma “ummeli wakho.” Kodwa-ke, ukuthi ubudlelwano bommeli neklayenti bukhona ngempela yini kungase kube umbuzo oyiqiniso ohluka ukusuka endaweni ethile ukuya endaweni, futhi ukusetshenziswa kwale migomo kokuthi Abameli be-UAE akufanele kuthathwe njengokumelwa Abameli be-UAE ukuthi kukhona ubudlelwano beklayenti lommeli.
Ukubonisana kwasekuqaleni kobubanzi obunqunyelwe. Abasebenzisi bangase bahlanganyele ekubonisaneni okulinganiselwe kokuqala Kwabameli be-UAE ngenkokhelo. Abameli be-UAE bangase basetshenziselwe ukuthumela ukuxhumana nezinkokhelo zezingxoxo zokuqala zobubanzi obunomkhawulo phakathi kombuzo-Umsebenzisi kanye nommeli-Umsebenzisi. Imali ingase igunyazwe kusengaphambili, icutshungulwe, idluliselwe noma ibuyiselwe ngendlela abameli be-UAE abayibona ifaneleka ngokubona kwayo okuphelele nokuphelele. Inkokhelo ayinikezi ababuza-Abasebenzisi ilungelo lokuthola ukubonisana kokuqala noma ezinye izinsizakalo ezivela kummeli-Umsebenzisi. Abasebenzisi Ababuza imibuzo bayavuma ukuthi ummeli-Umsebenzisi unelungelo lokuhoxisa isithembiso sokubonisana kokuqala ngaphambi noma ngemva kokukhokha nganoma yisiphi isizathu, okuhlanganisa kodwa kungagcini nje lapho: ukuhlonzwa kokungqubuzana okungenzeka noma kwangempela kwezintshisekelo, ukuhlela izingxabano, noma uma ummeli-Umsebenzisi ekholelwa ukuthi akanabo ubuchwepheshe obufanele bokuhlinzeka ngokubonisana kuMsebenzisi obuzayo. Abasebenzisi bayavuma ukuthi noma yikuphi ukubonisana Kwabameli be-UAE kunomkhawulo esikhaleni seseluleko sokuqala esisekelwe olwazini oluthunyelwe Umsebenzisi obuza imibuzo kuwebhusayithi Yabameli be-UAE. Umsebenzisi obuzayo uyaqonda futhi uyavuma ukuthi noma isiphi iseluleko esitholiwe singokokuqala ngokwemvelo futhi asisebenzi esikhundleni sokubonisana nomuntu siqu kanye nokubuyekezwa okugcwele kodaba ngummeli oqeqeshiwe. Umsebenzisi obuzayo uyaqonda futhi uyavuma ukuthi ngesikhathi sokubonisana kokuqala Kwabameli be-UAE, ummeli-Umsebenzisi akakwazi ukufinyelela kulo lonke ulwazi oludingekayo ukuze anikeze iseluleko esigcwele sezomthetho kuMsebenzisi-mbuzo nokuthi noma yisiphi iseluleko esitholwe ukubuza-Umsebenzisi, ngakho-ke, uyisiqalo ngokwemvelo. Ummeli-Umsebenzisi ngeke abe nesibopho sokuhlinzeka ngezinsizakalo zezomthetho ezingaphezu kwesikophu esilinganiselwe sokubonisana kokuqala. Uma obuza-Umsebenzisi enquma ukugcina izinsiza ezengeziwe zommeli-Umsebenzisi ku-Lawyers UAE, Umsebenzisi obuza imibuzo kufanele acele ukufaka isivumelwano sesevisi yezomthetho esibhaliwe esinemininingwane yemigomo nemibandela yokumelwa, okuhlanganisa zonke izinkokhelo, izindleko nezinye izibopho. Zonke izinhlangothi ziyavuma ukuthi Abameli i-UAE abayona ingxenye yanoma yikuphi ukumelwa okungase kwenzeke ngale kokubonisana okulinganiselwe kokuqala, futhi bayavuma ukuthi Abameli be-UAE bangabi nangozi kunoma yiziphi izingxabano ezivela kulokho kumelwa.
Ubulungu Bommeli. Abameli-Abasebenzisi bangakha iphrofayela Yabameli be-UAE futhi benze ukubonisana Kwabameli be-UAE. Izimali ezitholakala ekubonisaneni okukhokhelwe kokuqala zingafakwa ku-akhawunti yasebhange ekhethwe ngummeli-Umsebenzisi. Izinzuzo ummeli-Umsebenzisi ngamunye anelungelo lokuzithola zingancika ohlelweni lobulungu olukhethwe ummeli-Umsebenzisi. Abasebenzisi babameli bangakhansela ubulungu babo nganoma yisiphi isikhathi futhi abanalungelo lokubuyiselwa imali ngokwe-pro-rata noma ngezinye izindlela. Abasebenzisi bommeli bayavuma futhi bayavuma ukuthi Abameli be-UAE banelungelo lokubuyekeza izinzuzo zohlelo ngalunye lobulungu noma nini, nokuthi okuwukuphela kwendlela yommeli-Umsebenzisi ezibuyekezweni ezinjalo iwukukhansela ubulungu babo.
Imali Yezinsiza. Abameli i-UAE kanye noma amanxusa ayo angase adonse Imali Yesevisi ezinkokhelweni ezenziwe ngababuza-Abasebenzisi ngokubonisana okusekelwe ezingeni lobulungu lommeli-Abasebenzisi. Izimali Ezikhokhwayo Zesevisi zingalingana no-50% ngokubonisana Namalungu Ayisisekelo kanye no-20% Kumalungu Angochwepheshe. Izinkokhelo Zesevisi zisekelwe kumasevisi wokumaketha nobuchwepheshe ahlinzekwa Abameli be-UAE. Abasebenzisi bayavuma ukuthi Imali Yesevisi ilungile futhi inengqondo. Abameli i-UAE ingase iguqule izilinganiso Zezinkokhelo Zesevisi nganoma yisiphi isikhathi nganoma yisiphi isizathu ngokubona kwayo okuphelele nokuphelele.
Izinkokhelo. Abameli be-UAE bacubungula izinkokhelo besebenzisa inkundla yokukhokha ye-inthanethi ye-Stripe. Bonke Abasebenzisi abenza noma abamukela izinkokhelo ngamaLawyers UAE bavumelana nemigomo yesevisi ye-Stripe etholakala kokuthi www.stripe.com noma www.paypal.com. Ukuqinisekisa isevisi engaphazamiseki kanye nokwenza Abasebenzisi bakwazi ukuthenga imikhiqizo namasevisi ezengeziwe kalula, Abameli be-UAE kanye/noma i-Stripe noma i-PayPal bangagcina indlela yakho yokukhokha efayelini. Sicela uqaphele ukuthi kuyisibopho sakho ukugcina ulwazi lwamanje lokukhokha kufayela Nabameli be-UAE. Amasevisi okucubungula inkokhelo Yabasebenzisi Kubameli Be-UAE ahlinzekwa yi-Stripe noma i-PayPal futhi angaphansi Kwesivumelwano Se-akhawunti Ye-Stripe Connected, esihlanganisa Imigomo Yesevisi Ye-Stripe (ngokuhlangene, “Isivumelwano Sezinsizakalo Ze-Stripe”). Ngokuvumelana nale migomo noma ukuqhubeka nokusebenza Njengomsebenzisi Wabameli Be-UAE, uvuma ukuboshwa Isivumelwano Sesevisi Se-Stripe noma se-Paypal, njengoba okufanayo kungase kushintshwe yi-Stripe ngezikhathi ezithile. Njengombandela wabameli i-UAE evumela izinsizakalo zokucubungula inkokhelo nge-Stripe, uyavuma ukunikeza Abameli be-UAE ulwazi olunembile noluphelele mayelana nawe nebhizinisi lakho, futhi ugunyaza Abameli be-UAE ukuthi babelane ngalo kanye nolwazi lokwenziwe oluhlobene nokusebenzisa kwakho izinsizakalo zokucubungula izinkokhelo ezinikeziwe. nge-Stripe noma i-Paypal.
Imisebenzi Yommeli Ngokuphathelene Nezingxabano, Ukufaneleka, kanye neLayisense. Bonke abameli-Abasebenzisi kufanele baqinisekise ukuthi akukho ukungqubuzana kwezithakazelo nokuthi ummeli-Umsebenzisi uyakwazi ukunikeza ngokufanelekile ukubonisana kokuqala okuceliwe. Imali ekhokhwa ngumbuzo-Umsebenzisi ayikhokhelwa kummeli-Umsebenzisi kuze kube yilapho sekwenziwe ukubonisana kokuqala. Ngakho-ke, uma noma iyiphi inkinga ivimbela ummeli ukuthi angakwazi ukunikeza ukubonisana kokuqala, ummeli-Umsebenzisi unesibopho sokuphetha ngokushesha ukubonisana kokuqala futhi avumele obuza-Umsebenzisi ukuthi athole imbuyiselo kanye/noma akhethe enye. ummeli-Umsebenzisi. Bonke abameli-Abasebenzisi bayagunyaza ukuthi banelayisense yokusebenzisa umthetho kanye nokuma okuhle nenhlangano yezomthetho eyodwa noma ngaphezulu e-United Arab Emirates noma e-Dubai ngesikhathi sokudala i-akhawunti Yabameli be-UAE nangesikhathi sokuhlinzeka nokuhlinzeka ngezinsizakalo zokubonisana querying-Abasebenzisi. Abameli-Abasebenzisi bayavuma ukuthi bazoyeka ukunikeza nokuhlinzeka ngezinsizakalo kuplathifomu Yabameli be-UAE futhi basuse i-akhawunti yabo ku-Lawyers UAE ngokushesha uma ilayisense yabo yokwenza umthetho imisiwe noma ihoxiswa.
Eminye Imisebenzi Yommeli. Ngokungeziwe kule misebenzi engenhla emayelana nezingxabano, amandla, kanye nelayisensi, ummeli-Abasebenzisi bayavuma ukuthi uma benikela ngokuhlinzeka ngokuxoxisana okusemthethweni Kwabameli base-UAE, bazophendula imibuzo-Abasebenzisi ngokushesha nangenkuthalo. Abameli-Abasebenzisi bayavuma ukuthi bazoqedela ukubonisana kokuqala futhi bahambise isikhathi esikhokhiswayo phakathi kwezinsuku ezintathu (3) ngemuva kokuthi iklayenti ligunyaze kusengaphambili inkokhelo ngokukhetha inketho yokuthumela Isikhathi ekhasini lemilayezo okuhlanganisa umlando wengxoxo nomsebenzisi obuzayo. Abameli-Abasebenzisi bayavuma ukuthi balahlekelwa yinoma yiliphi ilungelo lokuthola inkokhelo uma bengakaqedi ukubonisana kokuqala kanye nesikhathi esithunyelwe ngaso umnqamulajuqu. Abameli-Abasebenzisi bayavuma ukuthi ukwaneliseka kombuzo-Umsebenzisi kuqinisekisiwe, futhi noma yiziphi izindleko eziphikiswayo nganoma yisiphi isizathu ngeke zikhokhwe.
Isaziso Sokuziphatha Kommeli. Uma ungummeli obamba iqhaza kunoma iyiphi ingxenye yale webhusayithi, uyavuma ukuthi Imithetho Yokuziphatha Kochwepheshe yezindawo lapho unikezwe khona ilayisensi (“Imithetho”) isebenza kuzo zonke izici zokubamba kwakho iqhaza nokuthi uzoyithobela le Mithetho. Le Mithetho ihlanganisa kodwa ayigcini lapho, imithetho ehlobene nokugcinwa kuyimfihlo, ukukhangisa, ukucela amakhasimende, umkhuba ongagunyaziwe womthetho, nokuhlanekezela iqiniso. Abameli i-UAE iyasichitha sonke isibopho sokuthobela le Mithetho. Abasebenzisi bayavuma ukuthi abameli be-UAE bangabi nangozi nganoma yikuphi ukwephulwa kwezimiso zokuziphatha okwenziwa abameli abasebenzisa le webhusayithi. Abameli bayavuma ukugcina lonke ulwazi nokuxhumana okutholwe ngale webhusayithi kuyimfihlo ngokuphelele, okuhlanganisa kodwa kungagcini nje kulwazi lobunikazi mayelana nezinsizakalo zabameli be-UAE.
Inqubomgomo yobumfihlo. Ukuvikela ubumfihlo bakho kubaluleke kakhulu kubameli base-UAE. Sicela ubuyekeze Inqubomgomo yethu Yobumfihlo, echaza ukuthi Abameli be-UAE baphatha kanjani ulwazi lwakho lomuntu siqu futhi bavikele ubumfihlo bakho.
Imikhawulo ekusetshenzisweni. Okuqukethwe kule webhusayithi kwenzelwe ukusetshenziswa kwakho siqu hhayi ukuxhashazwa kwezohwebo. Awungeke usebenzise le webhusayithi ukuthola ukuthi umthengi ufanelekile yini ukuthola: (a) isikweletu noma umshuwalense wezinhloso zomuntu siqu, zomndeni noma zasekhaya; (b) ukuqashwa; noma (c) ilayisense noma inzuzo kahulumeni. Awukwazi ukubola, ukuhlehlisa unjiniyela, ukuqaqa, ukuqasha, ukuqasha, ukubolekisa, ukuthengisa, imali encane, noma ukudala imisebenzi evela kule webhusayithi. Futhi awunakusebenzisa noma iyiphi isoftware yokuqapha noma yokuthola inethiwekhi ukuthola ukwakhiwa kwesayithi, noma ukukhipha imininingwane ngokusetshenziswa, ubunikazi bomuntu noma abasebenzisi. Awungeke usebenzise noma iyiphi irobhothi, isicabucabu, enye isoftware ezenzakalelayo noma idivaysi, noma inqubo yezandla yokuqapha nokukopisha iwebhusayithi yethu noma okuqukethwe ngaphandle kwemvume ebhaliwe. Awungeke usebenzise le webhusayithi ukudlulisa noma yikuphi ukuxhumana okungamanga, okukhohlisayo, okukhohlisayo noma okungekho emthethweni. Awukwazi ukukopisha, ukuguqula, ukukhiqiza kabusha, ukushicilela kabusha, ukusabalalisa, ukubonisa, noma ukuhambisa ngenjongo yokuhweba, engenzi nzuzo noma yomphakathi konke noma ingxenye ethile yale webhusayithi, ngaphandle kwezinga elivunyelwe ngenhla. Awungeke usebenzise noma uthumele kwelinye izwe noma uthumele kabusha le webhusayithi noma enye ingxenye yayo, noma okuqukethwe okwephula imithetho kanye nemithethonqubo yokulawulwa kokuthekelisa yase-United States of America. Noma yikuphi ukusetshenziswa okungagunyaziwe kwale webhusayithi noma okuqukethwe kwayo akuvunyelwe.
Akukho ukusetshenziswa okungekho emthethweni noma okungavunyelwe. Njengombandela wokusebenzisa kwakho iwebhusayithi Yabameli be-UAE, ugunyaza Abameli be-UAE ukuthi ngeke usebenzise iwebhusayithi Yabameli be-UAE nganoma iyiphi injongo engekho emthethweni noma enqatshelwe yile migomo, imibandela, kanye nezaziso. Akumele usebenzise iwebhusayithi Yabameli be-UAE nganoma iyiphi indlela engalimaza, ikhubaze, ithwalise kanzima, noma ikhinyabeze iwebhusayithi Yabameli be-UAE noma iphazamise ukusebenzisa nokujabulela kwanoma iyiphi enye inhlangano iwebhusayithi Yabameli be-UAE. Ngeke ukwazi ukuthola noma uzame ukuthola noma yiziphi izinto noma ulwazi nganoma yiziphi izindlela ezingatholakalanga ngamabomu noma ezihlinzekwe ngamawebhusayithi e-Lawyers UAE. Abameli be-UAE bangasetshenziswa kuphela ngabasebenzisi ababuza imibuzo kanye nabammeli-Abasebenzisi ngenjongo yokwenza ukubonisana kokuqala kwezomthetho ku-inthanethi. Noma yikuphi ukusetshenziswa ngabasebenzisi abangabuzi-Abasebenzisi noma ummeli-Abasebenzisi okungakhawulelwe ekuqhubeni ukubonisana kwezomthetho kokuqala kwe-inthanethi kunqatshelwe ngokuphelele.
Amalungelo Nezibopho Zethu. Abameli i-UAE akuwona umshicileli noma umbhali wezokuxhumana okusemthethweni noma okuqukethwe kule webhusayithi. Yindawo yokuxhumana phakathi kwabasebenzisi. Abameli be-UAE abanaso isibopho sokubuyekeza, ukuhlela noma ukugunyaza ukuxhumana. Nakuba singeke senze isiqinisekiso esiphelele sokuvikeleka kwesistimu, Abameli be-UAE bathatha izinyathelo ezifanele ukugcina ukuphepha. Uma unesizathu sokukholelwa ukuthi ukuphepha kwesistimu kuphuliwe, xhumana nathi nge-imeyili ukuze uthole usizo. Uma abasebenzi bezobuchwepheshe be-Lawyers UAE bethola ukuthi amafayela noma izinqubo zelungu ziwusongo ekusebenzeni okufanele kwesistimu noma ekuvikelekeni kwamanye amalungu, Abameli be-UAE bayaligodla ilungelo lokususa lawo mafayela noma ukumisa lezo zinqubo. Uma Abameli be-UAE abasebenzi bezobuchwepheshe besola ukuthi igama lomsebenzisi lisetshenziswa othile ongagunyaziwe umsebenzisi ofanele, Abameli be-UAE bangakhubaza ukufinyelela kwalowo msebenzisi ukuze kugcinwe ukuphepha kwesistimu. Abameli i-UAE inelungelo, ngokubona kwethu kuphela futhi okuphelele, (i) ukuhlela, ukuhlela kabusha noma ukushintsha noma yikuphi okuqukethwe, (ii) ukuhlela kabusha noma yikuphi okuqukethwe ukuze kubekwe endaweni efaneleke kakhulu noma (iii) isikrini sangaphambili noma susa noma yikuphi okuqukethwe okunqunywe njengokungalungile noma okwephula le migomo yokusebenzisa, kuhlanganisa kodwa kungagcini ngokuqukethwe okuqukethe ulimi oluhlambalazayo nezikhangiso. Abameli i-UAE inelungelo lokwenqaba isevisi kunoma ubani kanye nokukhansela ukufinyelela komsebenzisi noma nini. Uyavuma ukuthi Abameli be-UAE abanaso isibopho sokugcina noma ukukhiqiza idatha eshicilelwe noma egcinwe ku-Lawyers UAE. Uyavuma Abameli i-UAE ngeke babe nesibopho sokukhiqiza noma ukuhlinzeka ngolwazi noma idatha eshicilelwe ku-Lawyers UAE Kuwe noma abantu besithathu nganoma yisiphi isizathu.
Amalungelo Nezibopho Zakho. Ubophezelekile ngokomthetho nangokokuziphatha kunoma yikuphi ukuxhumana okushicilelayo noma okuthumelayo usebenzisa le webhusayithi. Unesibopho sokuhlonipha amalungelo abanye, okuhlanganisa namalungelo empahla yobuhlakani (ilungelo lobunikazi, ilungelo lobunikazi kanye nophawu lokuhweba), ilungelo lobumfihlo kanye nelungelo lokungadedelwa noma lokunyundelwa. Unikeza Abameli be-UAE imvume kunoma yimiphi imisebenzi oyidalayo kule webhusayithi njengengxenye yenqubo evamile yokwenza isipele. Unelungelo lokususa noma yimiphi imisebenzi yakho kuwebhusayithi nganoma yisiphi isikhathi. Ukuhambisa okuqukethwe kwanoma yimuphi umsebenzi ongekho emthethweni kuwukwephula le Migomo Yokusebenzisa. Abameli i-UAE ivulekele amalungu emhlabeni wonke, futhi Abameli be-UAE abakwazi ukuqinisekisa ukuthi ngeke ungene enkingeni yezomthetho kwezinye izindawo mayelana nokuxhumana kwakho. Uma unesikhalazo mayelana nokuziphatha noma ukuxhumana komunye Umsebenzisi, kuyisibopho sakho ukuzama ukuxazulula ukungqubuzana, ngokuvamile ngokuthinta lowo muntu ngokuqondile, uma kungenzeka. Ngokuvamile, Abameli be-UAE ngeke babambe iqhaza ekuxazululeni izingxabano phakathi kwakho nabanye Abasebenzisi. Abameli be-UAE abathwesi umthwalo ngokuziphatha kwakho noma okwabanye Abasebenzisi. Naphezu kwalokhu okungenhla, uma leso sikhalazo noma ukungqubuzana kuvela, Umsebenzisi noma Abasebenzisi bangacela ukuthi Abameli be-UAE bangenele futhi bazame ukuxazulula ingxabano. Noma yisiphi isicelo esinjalo akusona isiqinisekiso sokuthi Abameli be-UAE (i) bazongenela, (ii) bangenelele ngesikhathi, (iii) baxazulule ingxabano bevuna uhlangothi oluthile noma olunye noma (iv) baxazulule ngempumelelo isimo. Isinqumo sokungenelela silele ku-Lawyers UAE, ngokubona kwethu kuphela nokuphelele. Ukufinyelela kwakho ku-Lawyers UAE kungokusebenzisa wena kuphela. Uma ufuna ukusabalalisa kabusha ukuxhumana okuthola kule webhusayithi, kuyisibopho sakho ukuthola imvume kumbhali wokuxhumana (kanye nanoma yimuphi omunye umuntu onamalungelo). Uyavuma ukusiza ukuvikela i-akhawunti yakho nokuphepha kwabanye abasebenzisi ngokugada iphasiwedi yakho. Uma unesizathu sokukholelwa ukuthi iphasiwedi yakho isengozini noma kube khona ukusetshenziswa okungagunyaziwe kwe-akhawunti yakho, uyavuma ukuthintana Nabameli be-UAE ngokushesha ngangokunokwenzeka.
Okuqukethwe okungafanelekile. Lapho ufinyelela iwebhusayithi, uyavuma ukungalayishi, ukudawuniloda, ukubonisa, ukwenza, ukudlulisa noma ukusabalalisa ngenye indlela noma yikuphi okuqukethwe: (i) okunenhlamba, okuhlambalazayo, okuyichilo, izithombe zocansi, okuhlukumezayo noma okusongelayo; (b) ikhulumela noma ikhuthaze ukuziphatha okungase kube icala lobugebengu, kubangele isibopho somphakathi noma kwephule noma yimuphi umthetho osebenzayo wendawo, wombuso, kazwelonke noma wangaphandle; noma (c) akhangisa noma acele izimali noma acele izimpahla noma amasevisi. Abameli i-UAE inelungelo lokunqamula noma lokususa lokho kwaziswa kumaseva ayo. Abameli be-UAE bazosebenzisana ngokugcwele nanoma yiziphi izikhulu zomthetho noma ama-ejensi ophenyweni lwanoma yikuphi ukwephulwa kwale Migomo Yokusebenzisa noma kwanoma yimiphi imithetho esebenzayo. Udedela ilungelo lokucela noma lokubizela amarekhodi kubameli be-UAE okuhlanganisa kodwa okungagcini nje kunoma yiluphi ulwazi noma idatha eshicilelwe Kwabameli be-UAE nganoma yisiphi isizathu.
Izixhumanisi eziya kumawebhusayithi wesithathu. Le webhusayithi ingase iqukathe izixhumanisi zamawebhusayithi alawulwa amaqembu ngaphandle Kwabameli be-UAE. Abameli i-UAE ingase inikeze izixhumanisi kwezinye izingcaphuno noma izinsiza engahlangene nazo. Abameli i-UAE ayinasibopho futhi ayitusi noma yamukeli noma imuphi umthwalo wemfanelo ngokutholakala, okuqukethwe, imikhiqizo, izinsizakalo noma ukusetshenziswa kwanoma iyiphi iwebhusayithi yezinkampani zangaphandle, noma iyiphi iwebhusayithi efinyelelwe kuyo, nanoma yiziphi izinguquko noma izibuyekezo kumasayithi anjalo. Abameli be-UAE abaqinisekisi mayelana nokuqukethwe noma ikhwalithi yemikhiqizo noma amasevisi anikezwa amasayithi anjalo. Abameli i-UAE ayinasibopho sokusakaza ngewebhu nanoma yiluphi olunye uhlobo lokudlulisela olutholwa kunoma iyiphi iwebhusayithi yezinkampani zangaphandle. Ukufakwa kwanoma isiphi isixhumanisi akusho ukugunyazwa Abameli be-UAE bewebhusayithi Yenkampani Yasesithathu, futhi akusho ukuthi Abameli be-UAE bangabaxhasi, baxhumene noma bahlotshaniswa, baqinisekisa, noma bagunyazwe ngokusemthethweni ukusebenzisa noma yiliphi igama lokuhweba, uphawu lokuhweba olubhalisiwe, ilogo, uphawu olusemthethweni noma olusemthethweni, noma uphawu olune-copyright olungase lubonakale kuzixhumanisi. Uyavuma ukuthi unazo zonke izingozi ezihlobene nokufinyelela nokusebenzisa okuqukethwe okunikezwe kuwebhusayithi yezinkampani zangaphandle futhi uyavuma ukuthi Abameli be-UAE abanasibopho sanoma yikuphi ukulahlekelwa noma ukulimala kwanoma yiluphi uhlobo ongase ukuthole ekusebenzelaneni nenkampani yangaphandle.
Ubunikazi. Le webhusayithi lawyersuae.com noma Lawyers UAE iphethwe futhi isetshenziswa yi-Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants. Kulungile, izihloko kanye nezinto ozithakaselayo kanye nezinto ezinikezwe kule webhusayithi, okuhlanganisa kodwa kungagcini nje ngolwazi, amadokhumenti, amalogo, imifanekiso, imisindo nezithombe kungokwabameli be-UAE noma ababhali babo bezinye izinkampani, abathuthukisi noma abathengisi. Ngaphandle kokuthi kuhlinzekwe ngabameli be-UAE ngenye indlela, azikho izinto ezisetshenziswayo ezingakopishwa, zenziwe kabusha, zishicilelwe kabusha, zilayishwe, zilayishwe, zithunyelwe, ziboniswe, zidluliselwe noma zisatshalaliswe nganoma iyiphi indlela futhi akukho lutho kule webhusayithi oluzohunyushwa njengokunikeza noma yiliphi ilayisense ngaphansi kwanoma yimaphi amaLawyers UAE's. amalungelo empahla yengqondo, noma ngabe nge-estoppel, i-implication noma ngenye indlela. Noma yimaphi amalungelo anganikezwanga ngokucacile lapha agodliwe Abameli be-UAE noma i-Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants.
Ama-Copyrights. Konke ukwakheka kwesizindalwazi, umbhalo, ihluzo, ukukhethwa nokuhlelwa kwakho, kungokwakwa-Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants, WONKE AMALUNGELO AGEDIWE.
Izimpawu zokuthengisa. I-Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants, zonke izithombe nombhalo, nazo zonke izihloko zekhasi, imifanekiso yangokwezifiso nezinkinobho kuyizimpawu zesevisi, izimpawu zokuthengisa kanye/noma ingubo yokuhweba ye-Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants. Zonke ezinye izimpawu zokuthengisa, amagama emikhiqizo namagama ezinkampani noma amalogo ashiwo lapha ayimpahla yabanikazi bazo.
Ukuzikhulula Esibophweni Sezikweletu. Ulwazi, isofthiwe, imikhiqizo, kanye nezinsizakalo ezifakwe noma ezitholakala ngewebhusayithi ye-lawyersuae.com zingafaka phakathi okunganembile noma amaphutha okuthayipha. Izinguquko zengezwa ngezikhathi ezithile olwazini olulapha. Abameli be-UAE kanye/noma abaphethwe bayo bangenza intuthuko kanye/noma izinguquko kuwebhusayithi ye-lawyersuae.com noma kunini. Izeluleko ezitholwe ngewebhusayithi Yabameli be-UAE akufanele kuthenjelwe kuzo ezinqumweni zomuntu siqu, zezokwelapha, zomthetho noma zezezimali futhi kufanele uxhumane nochwepheshe abafanelekile ukuze uthole iseluleko esithile esifanelana nesimo sakho. Abameli i-UAE kanye/noma izinkampani ezingaphansi kwayo abenzi izethulo mayelana nokufaneleka, ukwethembeka, ukutholakala, ukufika ngesikhathi, nokunemba kolwazi, isofthiwe, imikhiqizo, izinsizakalo kanye nemifanekiso ehlobene equkethwe kuwebhusayithi ye-lawyersuae.com nganoma iyiphi injongo. Ngokwezinga eliphezulu elivunyelwe umthetho osebenzayo, lonke ulwazi olunjalo, isofthiwe, imikhiqizo, amasevisi kanye nemifanekiso ehlobene kunikezwa "njengoba injalo" ngaphandle kwewaranti noma izimo zanoma yiluphi uhlobo. Abameli i-UAE kanye/noma amanxusa ayo bayawachitha wonke amawaranti nemibandela ngokuphathelene nalolu lwazi, isofthiwe, imikhiqizo, amasevisi kanye nemifanekiso ehlobene, okuhlanganisa zonke iziqinisekiso ezishiwo noma izimo zokuthengiselana, ukufaneleka kwenjongo ethile, isihloko nokungaphuli umthetho. Ngokwezinga eliphezulu elivunyelwe umthetho osebenzayo, akukho mcimbi Abameli be-UAE kanye/noma izinhlangano ezisebenzisana nazo bayoba nesibopho sanoma yimuphi umonakalo oqondile, ongaqondile, wokujezisa, wengozi, okhethekile, ongumphumela noma yimuphi umonakalo ohlanganisa, ngaphandle komkhawulo, umonakalo wokulahlekelwa ukusetshenziswa. , idatha noma inzuzo, evela noma nganoma iyiphi indlela exhumene nokusetshenziswa noma ukusebenza kwewebhusayithi ye- lawyersuae.com, ngokubambezeleka noma ukungakwazi ukusebenzisa iwebhusayithi ye- lawyersuae.com noma amasevisi ahlobene, ukuhlinzekwa noma ukwehluleka ukunikeza izinsizakalo, noma nganoma yiluphi ulwazi, isofthiwe, imikhiqizo, amasevisi kanye nemifanekiso ehlobene etholwe ngewebhusayithi ye- lawyersuae.com, noma ngenye indlela evela ngenxa yokusebenzisa iwebhusayithi ye- lawyersuae.com, noma ngabe isekelwe esivumelwaneni, ubugebengu, ubudedengu, isikweletu esiqinile noma ngenye indlela, ngisho uma Abameli be-UAE noma noma yibaphi ababambisene nabo belulekwe ngokungenzeka komonakalo. Ngenxa yokuthi ezinye izifunda/iziphathimandla azikuvumeli ukukhishwa noma ukunqunyelwa kwesibopho sezomthetho ngomonakalo olandelanayo noma wengozi, umkhawulo ongenhla ungase ungakusebenzeli. Uma ungagculisekile nganoma iyiphi ingxenye yewebhusayithi ye- lawyersuae.com, noma nanoma yimiphi yale migomo yokusebenzisa, ukuphela kwakho kanye nekhambi elikhethekile ukuyeka ukusebenzisa iwebhusayithi ye- lawyersuae.com.
Ayikho iwaranti. Isizinda kanye nazo zonke izinto ezisetshenziswayo, imibhalo noma amafomu ahlinzekwe ngokusetshenziswa kwakho kwesizindalwazi anikezwa “njengoba injalo” kanye “njengoba etholakala”. Ngokwezinga eligcwele elivunyelwe umthetho, i-Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants noma Lawyers UAE iyazichitha ngokusobala zonke iziqinisekiso zanoma yiluphi uhlobo, kungakhathaliseki ukuthi zishiwo noma zishiwo, kuhlanganisa kodwa kungagcini nje ngokuba neziqinisekiso ezishiwo zokuthengiselana, ukufaneleka ngenjongo ethile, isihloko. nokungaphuli. I-Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants noma Lawyers UAE awenzi siqiniseko sokuthi: (a) isayithi noma izinto zokusebenza zizohlangabezana nezimfuneko zakho; (b) indawo noma impahla izotholakala ngokungaphazamiseki, ngesikhathi, ngokuvikelekile noma ngaphandle kwamaphutha; (c) imiphumela engatholwa ngokusetshenziswa kwendawo, nanoma yiziphi izinto ezihlinzekwa ngesizinda, izoba yiqiniso noma ithembeke; noma (d) ikhwalithi yanoma yimiphi imikhiqizo, amasevisi, ulwazi noma okunye okuthengiwe noma okutholwe nguwe ngesayithi noma ngokuncika ezintweni ezisetshenziswayo kuzohlangabezana nokulindelekile kwakho. Ukuthola noma yiziphi izinto ngokusebenzisa isiza kwenziwa ngokubona kwakho futhi ngokuzifaka engozini. I-Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants noma Abameli I-UAE ngeke ibe nesibopho sanoma yimuphi umonakalo ohlelweni lwakho lwekhompyutha noma ukulahlekelwa idatha okubangelwa ukulandwa kwanoma yikuphi okuqukethwe, izinto zokwakha, ulwazi noma isofthiwe.
Umkhawulo Wesibopho Sokuzibophezela. Uzobamba i-Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants noma Lawyers UAE kanye nezikhulu zayo, abaqondisi, abasebenzi, nama-ejenti kungenangozi futhi ukhiphe i-Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants noma Abameli be-UAE nganoma yikuphi okungaqondile, ukujezisa, okukhethekile, okwenzeka ngengozi, noma umonakalo owumphumela, nokho ovelayo (okuhlanganisa izimali zabameli kanye nazo zonke izindleko ezihambisanayo kanye nezindleko zokuqulwa kwecala nokulamula, noma ekuqulweni kwecala noma ekudlulisweni kwesikhalazo, uma kukhona, kungakhathaliseki ukuthi kufakwe icala noma ukuxazululwa kwecala), noma ngabe kusesenzo senkontileka, ubudedengu. , noma esinye isenzo esibi, noma esivela ngenxa noma esihlobene nalesi sivumelwano, okuhlanganisa ngaphandle komkhawulo noma isiphi isimangalo sokulimala komuntu siqu noma ukulimala kwempahla, okuvela kulesi sivumelwano nanoma yikuphi ukwephulwa kwanoma yimiphi imithetho yenhlangano, yesifunda, noma yendawo, izimiso, imithetho, noma imithethonqubo, noma ngabe Abameli be-UAE baye belulekwa ngaphambilini mayelana nokwenzeka komonakalo onjalo. Uma kukhona isikweletu esitholakala ngasohlangothini lwabameli be-UAE, sizokhawulelwa enanini elikhokhelwe imikhiqizo kanye/noma amasevisi, ngaphandle uma kuvunyelwe ngokuvumelana nesivumelwano sokuxazululwa sale migomo yokusebenzisa, futhi ngaphansi kwezimo angeke kube khona umphumela. noma umonakalo wokujezisa. Ezinye izifundazwe azikuvumeli ukukhishwa noma ukukhawulelwa komonakalo wengozi noma umphumela, ngakho umkhawulo ongenhla noma ukukhishwa kungase kungasebenzi. Akukho mcimbi lapho i-Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants noma Lawyers UAE, izinkampani zayo ezihlobene, noma abaqondisi benkampani abafanele, izikhulu, amalungu, abasebenzi, abaninimasheya, abasebenzisana nabo, abalingani bokusabalalisa noma ama-ejenti babophezelekile kunoma yiziphi izimali ezingokomthetho noma ezingaqondile. , umonakalo okhethekile, olandelanayo, wengozi, oyisibonelo, noma wokujezisa wanoma yiluphi uhlobo (okuhlanganisa, ngaphandle komkhawulo, noma yimuphi umonakalo wokulahlekelwa imali engenayo, inzuzo, ukusetshenziswa noma idatha), nokho, obangelwe, kungakhathaliseki ukuthi ngokwephulwa kwenkontileka, ubudedengu noma ngaphansi kwanoma iyiphi enye indlela. ithiyori yezomthetho, kungakhathaliseki ukuthi iyabonakala noma cha futhi noma ngabe i-Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants noma Abameli be-UAE baye belulekwa mayelana nokwenzeka komonakalo onjalo kanye naphezu kokuhluleka kwenjongo ebalulekile yanoma iliphi ikhambi elilinganiselwe. Abasebenzisi bayavuma ukuthi le mikhawulo yesibopho kuvunyelwana ngayo ekwabiweni kobungozi futhi ibonakala ezinkokhelweni okuvunyelwane ngazo yizinhlangano. Imikhawulo yesikweletu ebalulwe kulesi Sivumelwano iyingxenye ebalulekile yesisekelo sesivumelwano futhi Abathintekayo ngeke bangene kunoma yisiphi isivumelwano esingokomthetho sokuhlinzeka ngesevisi ngaphandle kweSivumelwano sale mikhawulo. NGAPHANDLE KWEZIBOPHO ZOKUBONISA ZOMSEBENZISI KU-AL OBAIDLI KANYE NO-AL ZAROONI AVOCATES KANYE NAKUBACEBISI BEZOMTHETHO NGAPHANSI KWALESI SIVUMELWANO, ISIBOPHO SESITHOMBE SONKE KOMUNYE NGEKE SESIDLULA IMALI EYIYONKE IMALI EKHOKHWA UMSEBENZISI KANYE NOMSEBENZI WABAPHATHI BE-UAE, KANYE NOMSEBENZI WABAPHATHI BE-UAE. OKUNYE AYIKUDLULA AMADIRHAM AYINKULUNGWANE EYODWA(AED 1,000.00).
Ukukhethwa Komthetho. Ngokusebenzisa le webhusayithi, uvuma ngokucacile ukuthi amalungelo nezibopho zakho zizobuswa futhi zihunyushwe ngokuvumelana nemithetho yase-United Arab Emirates, ngaphandle kwemithetho yayo yokuzikhethela. Noma isiphi isenzo somthetho noma inqubo ehlobene nokufinyelela kwakho noma ukusebenzisa iwebhusayithi ibuswa Isivumelwano Sokulamula kule migomo Yokusebenzisa. Le migomo Yokusebenzisa ayibandakanyi ngokucacile futhi ayibambi imigomo ye-UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods, engeke isebenze kunoma yikuphi ukuthengiselana okwenziwa ngokusebenzisa noma okunye okuhilela le webhusayithi.
Ukulungiswa Kwezingxabano; Ukulamula. Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants noma Lawyers UAE futhi uyavuma ukuzama ukuxazulula zonke izingxabano ngokusemthethweni izinsuku ezingu-30 ngaphambi kokufaka isicelo sokulamula. Esimweni lapho, asikwazi ukuxazulula ingxabano futhi sekudlule okungenani izinsuku ezingu-30 njengoba bonke abathintekayo benolwazi lokuba khona kwengxabano, i-Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants noma Lawyers UAE futhi uyavuma ukulamula konke. izingxabano kanye nezimangalo phakathi kwethu phambi komlamuli oyedwa. Izinhlobo zezingxabano nezimangalo esivuma ukulamula kuhloswe ngazo ukuthi zihunyushwe kabanzi. Kusebenza, ngaphandle komkhawulo, ezimangalweni ezivela ngenxa noma ezihlobene nanoma iyiphi ingxenye yobudlelwano phakathi kwethu, kungakhathaliseki ukuthi kusekelwe esivumelwaneni, ubugebengu, umthetho, ukukhwabanisa, ukuhlanekezela amaqiniso, nanoma iyiphi enye ithiyori yezomthetho; izimangalo ezivele ngaphambi kwale Migomo noma eminye yangaphambili (okuhlanganisa, kodwa kungagcini nje, izimangalo eziphathelene nokukhangisa); izimangalo okwamanje ziyisihloko secala okuhloswe ngalo ukuthi ungelona ilungu lekilasi eliqinisekisiwe; kanye nezimangalo ezingase zivele ngemva kokuqedwa kwale migomo. Ngezinjongo zalesi Sivumelwano Sokuxazulula, izinkomba ezithi “Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants noma Lawyers UAE” “thina” kanye “nathi” zifaka izinkampani ezingaphansi kwethu, esisebenzisana nabo, ama-ejenti, abasebenzi, abanduleli abanentshisekelo, abazolandela kanye nezabelo. , kanye nabo bonke abasebenzisi abagunyaziwe noma abangagunyaziwe noma abahlomuli bezinsizakalo noma imikhiqizo ngaphansi kwale migomo nanoma yiziphi izivumelwano zangaphambili phakathi kwethu. Ngaphandle kwalokhu okungenhla, noma yiliphi iqembu lingaletha isenzo somuntu ngamunye enkantolo yezimangalo ezincane. Uyavuma ukuthi, ngokungena kule migomo, wena kanye ne-Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants noma Lawyers UAE ngamunye uyeka ilungelo lokuqulwa kwecala ngabahluleli noma ukubamba iqhaza esenzweni sekilasi. Le Migomo ifakazela umsebenzi noma ukusetshenziswa kwewebhusayithi kwezohwebo phakathi kwezifunda, futhi ngaleyo ndlela i-Federal Arbitration Act ibusa ukutolika nokusetshenziswa kwalokhu kunikezwa. Lokhu kuhlinzekwa kokulamula kuzosinda ekuphelisweni kwale migomo. Iqembu elihlose ukufaka isenzo enkantolo yezimangalo ezincane noma lifune ukunxeshezelwa kufanele liqale lithumele, ngemeyili enesitifiketi se-UAE, Isaziso Sengxabano esibhaliwe (“Isaziso”) kwelinye iqembu, esizoqondiswa ku-: case@lawyersuae.com (“Ikheli Lesaziso”), kanye nekhophi ye-elekthronikhi kufanele ithunyelwe nge-imeyili ku-raj@lawyersuae.com. Isaziso kufanele (a) sichaze uhlobo nesisekelo sesimangalo noma impikiswano futhi (b) sibeke ukukhululwa okuthile okufunwayo (“Isidingo”). Uma Abameli be-UAE futhi ungafinyeleli esivumelwaneni sokuxazulula isimangalo zingakapheli izinsuku ezingu-30 ngemva kokuba Isaziso samukelwe, wena noma Abameli be-UAE ningase niqalise ukuqulwa kwecala. Phakathi nesixazululi, inani lanoma yikuphi ukunikezwa kwesinxephezelo okwenziwa Abameli be-UAE noma ngeke udalulwe kumxazululi kuze kube yilapho umlamuli enquma inani, uma likhona, wena noma Abameli be-UAE onegunya lalo. Isixazululi sizolawulwa Izinqubo Zokuxazulula Ingxabano Yezentengiselwano kanye Nezinqubo Ezingeziwe Zezingxabano Ezihlobene Nabathengi Zokuxazululwa Kwe-UAE, njengoba kushintshwe yile migomo, futhi kuzophathwa i-AAA. Umlamuli uboshwe yile migomo. Umlamuli uzokhipha isinqumo esibhaliwe esizwakalayo esanele ukuchaza okutholakele kweqiniso neziphetho zomthetho umklomelo osuselwe kuwo. Izinhlangothi ziyavuma ukuthi noma yimiphi imiklomelo noma okutholwe kweqiniso noma iziphetho zomthetho ezenziwe ekuxazululeni ingxabano noma isimangalo senziwa kuphela ngezinhloso zalokho kulamula, futhi angeke isetshenziswe yinoma yimuphi omunye umuntu noma inhlangano kunoma yikuphi ukunxeshezelwa kwakamuva kwanoma ikuphi. ingxabano noma isimangalo esihilela i-Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants noma Lawyers UAE. Izinhlangothi ziyavuma ukuthi kunoma yikuphi ukuxazululwa kwengxabano noma isimangalo, alikho iqembu elizothembela ekufezeni okuthile kunoma yimuphi umklomelo noma ukutholwa kweqiniso noma isiphetho somthetho owenziwe kunoma yikuphi ukuxazululwa kwanoma iyiphi ingxabano noma isimangalo lapho i-Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Abeluleki Bezomthetho noma Abameli I-UAE bekuyiphathi. Umlamuli anganikeza usizo lokujezisa esivuna kuphela umuntu ngamunye ofuna ukukhululeka futhi kuze kube sezingeni lapho kudingeka khona ukuze anikeze usizo olugunyazwe yilokho okushiwo yilelo qembu. WENA KANYE NO-AL OBAIDLI KANYE NO-AL ZAROONI OKUTHETHWAYO KANYE NABEXULEKISI BEMTHETHO BAVUMA UKUTHI NGASINYE SINGALETHA IZICELO ESIFANELE ESINYE KUPHELA NGEZINDLELA ZAKHO NOMA NGAMUNYE FUTHI HHAYI NJENGABAMANGALI NOMA AMALUNGU EKALASI KUNOMA YILUPHI ISIGABA ESIPHELELWE ESIKHATHINI SOMmeleli Wendawo noma Ummeleli Wesifunda. . Umlamuli ngeke abe namandla okwenza amaphutha ezomthetho noma izizathu zomthetho, futhi amaqembu ayavuma ukuthi noma yimuphi umklomelo wokujezisa ungashiywa noma ulungiswe lapho kudluliswa icala yinhlangano ethile enkantolo yamandla afanele nganoma yiliphi iphutha elinjalo. Iqembu ngalinye lizothwala izindleko zalo nezimali zalo kunoma yisiphi isikhalazo esinjalo. Umlamuli ngeke anikeze ukukhululeka okungaphezu kwalokhu okunikezwa yile migomo noma anikeze umonakalo wokujeziswa noma yimuphi omunye umonakalo ongalinganiswa nomonakalo wangempela. Ngaphezu kwalokho, ngaphandle uma nobabili kanye no-Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants noma Abameli be-UAE nivumelana ngenye indlela, umlamuli angeke ahlanganise izimangalo ezingaphezu koyedwa, futhi angeke angamele noma yiluphi uhlobo lwenqubo yommeleli noma isigaba. Uma lesi simiso esithile kutholakala ukuthi asinakuphoqeleka, konke lokhu kuhlinzekwa kokulamula kuzobe kungasebenzi futhi kungasebenzi. Yonke imikhakha yokuqhubeka kokulamula, nanoma yisiphi isinqumo, isinqumo noma umklomelo owenziwe ngumlamuli, kuzoba yimfihlo ngokuqinile, ngaphandle kwengxenye yesikhalazo enkantolo yamandla afanele. Umlamuli, hhayi noma iyiphi inkantolo, noma inkantolo yendawo, ozoba negunya elikhethekile lokuxazulula noma iyiphi impikiswano ephathelene nokuchazwa, ukusebenza, ukuphoqelelwa noma ukwakheka kwalesi Sivumelwano kufaka phakathi, kepha kungagcini, kunoma yisiphi isimangalo sokuthi konke noma ingxenye yalesi Sivumelwano ayisebenzi noma ayisebenzi.
Ukunqanyulwa / Ukuvinjelwa Kokufinyelela. I-Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants noma Abameli I-UAE igodle ilungelo, ngokubona kwayo kuphela, ukunqamula ukufinyelela kwakho kuwebhusayithi ye- lawyersuae.com kanye nezinsizakalo ezihlobene nanoma iyiphi ingxenye yayo nganoma yisiphi isikhathi, ngaphandle kwesaziso.
Ukuguqulwa. I-Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants noma Lawyers UAE inelungelo lokushintsha imigomo, izimo, nezaziso lapho kunikezwa khona i-Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants noma Abameli be-UAE iwebhusayithi, okuhlanganisa kodwa kungagcini nje ngokukhokhiswa. okuhlobene nokusetshenziswa kwe-Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants noma iwebhusayithi yabameli be-UAE. Kuyisibopho sakho ukubuyekeza le Migomo Yokusebenzisa ngezikhathi ezithile ukuze uthole izinguquko, ezenziwe ngaphandle kwesaziso kuwe.
Ukuvuma. Ngokusebenzisa i-Al Obaidli & Al Zarooni Advocates & Legal Consultants noma izinsizakalo ze-Lawyers UAE noma ngokufinyelela isiza se-wyersuae.com, uyavuma ukuthi uneminyaka eyishumi nesishiyagalombili (18) ubudala noma ngaphezulu, ukuthi uyifundile futhi wayiqonda le migomo yokusebenzisa, futhi ukuthi uvume ukubotshwa yibo.
Copyright © 2022 Law Firms Dubai | Inikwe amandla yiCopper Communications